लकडाउन अवधिको घर भाडा नलिन सर्वोच्चले आदेश दिएको समाचार गलत – MySansar
1 thought on “लकडाउन अवधिको घर भाडा नलिन सर्वोच्चले आदेश दिएको समाचार गलत”
सर्वोच्च अदालतको मानहानि हुने यस्तो धेरैको जिविका चलाऊने र् रिन तिर्ने आधार भयको सम्पत्ति निसुल्क उपभोग गर्न पाउने गलत समाचार दिने ब्यक्ती बा संस्थालाई सरकार र् सर्बोच्च अदालत कार्यवाही गरियुन। घरभाडामा बस्ने तर भाडानै तिर्न नचाहने बा नतिर्ने भनेको अर्काको घर सम्पत्ति कब्जा गर्ने अपराध नै हो। घर भाडामा लियर ब्यवसाय गर्नेले लक्दाउन भयो भन्दैमा कसैलाई निसुल्क केही दिन्दैन; घर भाडामा दिनेको रिन तिरिदिन्दैन त् घर भाडा मा दिनेले मात्रै किन घर भाडा माफ बा मिनाह गर्नु पर्ने?
लकदाउन ब तेस्तै कुनै पनि समस्याले घर भाडामा बस्ने मात्रै होईन घर भाडामा दिने पनि समस्यामा परेको छ्। घर भाडामा लिनेको मात्रै खाने मुख र् तिर्नु पर्ने रिन छैन घर भाडामा राख्नेको खाने मुख र् तिर्नु पर्ने रिन पर्ने हुन्छ। घर भाडामा लिने पनि सबैमा सामाजिक इमान्दारिता हुँदैन। घर भाडामा दिनेलाई थग्ने प्रवितिका पनि हुन्छ। तेसैले जसरी घर भाडामा बस्नेको संघ बनायको छ् घर भाडामा दिनेको पनि बलियो संघ हुनु पर्छ।
घर भाडामा बस्ने कोही कस्तो पनि हुन सक्छन भन्ने कुरा मैले पनि भोगेकै छु।आवश्यक सबै सुबिधा भयको शहर भित्र सडक छेउको यक लिभिङ रुम ३ बेद रुम, यक स्तोररुम यक किचन र् यक बाथरुम भयको फ्लायत मैले मात्र् महिनाको ५०००मा भाडामा दियको थिय्। मैले कुनै पनि घर भाडामा बस्ने सित कहिले पनि घर भाडा माग्ने गरेको छैन र् कहिले पनि घर भाडा बधायको छैन। भाडा दिन आय लिने दिन नआय तेसतै पर्‍यो होला भय पछी दिन अैइ हाल्छ भनेर बस्थे। त्यो सित घर भाडाको कुरा गरे अवस्था ठीक छैन गाउको जग्गा बेचेर तिर्छु भनेर ताल्दै barsauko samm ko भाडानै नै नतिरी भागे। भाडा नतिरेकोमा पुलिश कार्य्वाही गराउन नसकिने अदालति प्रकृयामा जानु पर्ने। अनि अदालति प्रकृयाको खर्च उठाउनु पर्ने भाडा भन्दा बढी हुने!!! को पीडित छन भाडाको सम्स्या बाट घर धनी कि घर भाडामा लगाउने?